Tantara misongadina mikasika ny Taridàlana
Olon'ny jery ve ianao (ary te-hizara ny tantaranao amin'izany fomba izany)? Sa mila fanairana raha vao misy tatitra mikasika ny filoham-pirenen'i Moldova? Ireto misy fitaovana vaovao vitsivitsy hanampy anao hikaroka ny tantaranao manaraka, sy sehatra vaovao (tahaka ny fampahatsiahivana ny Tantara sy ireo sary mampifandray) hanolorana tsotra sy mazava fampahalalana.
Rosia12 Mey 2019
Fitaovana01 Desambra 2013
Tanjona roa no kendren'ny fifampitohizan-drohy: manome antoka ny fangaraharana sy ny fahazoan'ireo mpamaky hahatoky antsika, fa manampy ihany koa amin'ny fampidirana ny toe-javatra mahakasika ny lohahevitra iray na hampitodika ny mpamaky any amin'ny loharano maro hafa. Toy izany no tokony hanaovana ny fifampitohizan-drohy.
Blaogim-Piarahamonina GV 14 Desambra 2018
Fitaovana 30 Jona 2013
Ny fanaovan-gazety tarihan'ny rakitra dia dingan'ny fanaovan-gazety mifototra amin'ny fandinihana sy ny fisafidianana miaraka amina fitaovana manana loharano misokatra - na 'open source', fitambaran-drakitra midadasika, izay afaka tsidihana malalaka ao anaty aterineto. Ny Novambra lasa teo, tanatina atrikasa naharitra 48 ora tany amin'ny Fetiben'ny Mozilla tany Londona, nanomboka niasa ho amin'ilay torolàlana voalohan'ny Fanaovan-gazety Firaketana ireo mpanao gazety sy Mpandrafitra rindram-baiko marobe. Natomboka tamin'ny fomba ara-dalàna io Torolàlana io ny 28 Aprily 2012, tany amin'ny Fetibe Iraisam-pirenen'ny Fanaovan-gazety tany Perugia (afaka alaina maimaim-poana ao anaty aterineto).